केपी ओलीको अहङ्कारले मुलुक डुब्दैछ
२०७५ माघ २८ सोमबार १७:५३:००
६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ । चुनावअघि तत्कालीन एमाले र मधेसमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजपाबीच टकराव थियो । मधेस–मुद्दामा अनुदार बनेको भन्दै राजपाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेस पस्नै दिएको थिएन । एमालेका कार्यकर्ता पनि मधेस पस्न, बस्न सक्ने अवस्था थिएन । चुनावपछि परिस्थिति बदलियो । संविधान संशोधनको मुद्दामा नेकपा सकारात्मक देखिएपछि राजपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । तर, सरकार गठनको एक वर्ष बित्न आँट्दा पनि केपी ओली संविधान संशोधन गर्न तयार नदेखिएपछि राजपा सरकारसँग रुष्ट छ । र, समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेको छ । यिनै विषयमा आधारित रहेर बाह्रखरीका अक्षर काकाले राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–
चुनावअघि सत्ता–मधेसबीच एक खालको टकराव थियो । चुनावपछि सत्तालाई समर्थन गर्ने तहमा पुग्नुभयो, सत्तालाई हेर्ने तपाईंहरूको दृष्टिकोण बदलिएको कि मधेसलाई हेर्ने सत्ताको दृष्टिकोण फेरियो ?
केपी ओली बातैपिच्छे ‘सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल’को नारा दिएकै छन् । तराई–मधेसका जनतालाई पनि सुखी बनाउनु नै छ । हामीले सोच्यौँ– केपी ओलीको सरकारले जनतालाई सुखी बनाउला । संविधानमा आवश्यक कुरा संशोधन गरेर तराई–मधेसी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ला । रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायत जेलमा कोचेर राखेका थारूहरूलाई बाहिर निकाल्ला । आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाएर अनाहकमा दुःख पाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लेला । हिमाल–पहाड–मधेसमा पहिचानका लागि लडिरहेका जनतालाई सुखी बनाउला । जनलाई सुखी बनाउला, जनतालाई समृद्ध बनाउला ।
यही ठानेर हामीले बाहिरबाट समर्थन गर्‍यौँ । नेपाली जनताले जसरी आशा र भरोसा गरे, शक्तिशाली सरकारसँग हामीले पनि आशा गर्नु अन्यथा थिएन ।
सरकारलाई समर्थन र फिर्ता महत्त्वपूर्ण होइन । महत्त्वपूर्ण त हाम्रो भूमिका हो । हामी प्रतिपक्षको लबीमा बसेर पूरा गरिरहेकै छौँ । सरकारलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ । राम्रो काम गर्‍यो, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छौं । गलत गर्‍यो भने आलोचना गर्छौं ।
यो भ्रम कसैलाई नहोस्– हामी सरकारको समर्थक होइनौँ । न सरकारका अंग हौँ । गुण–दोषको आधारमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याएका छौँ ।
सँगै लड्यौँ । सँगै मार खायौँ । कति साथीहरू सँगै मरे पनि । सँगै मिलेर दबाब दिन पाएको भए दबाब पनि पथ्र्यो होला । बीचमै छाडेर हिँड्नुभयो । सत्ताले आन्दोलनकारी शक्तिलाई ‘डिभाइड एण्ड रुल’ गर्‍यो । डिभाइड (विभाजन)को उहाँ अङ्ग बन्नुभयो ।
मधेसीको मात्रै होइन, थारूको अवस्था झन् विकराल छ । त्यत्रो सङ्घर्ष गरे । ज्यान उत्सर्ग गरे । खै थरूहट ? थरूहट त पाएनन् पाएनन्, पहिचान झन् ओझेल पर्‍यो । अधिकार माग्ने थारूहरूलाई जेलमा कोचेर राखेको छ ।
भन्न खोजेको के भने, यो मुलुकमा अधिकार, पहिचान चाहने शक्ति, समूहहरू वर्ग–समुदाय–जातजाती सबैको आन्दोलन बीचबाटैमा रोकियो । कुनै पनि आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । माओवादी आन्दोलनको अवस्था पनि त्यस्तै भयो । हजारौँ मान्छेको बलिदानी पनि बीचमै अलपत्र पर्‍यो ।
वैशाख ७, ८ र ९ गतेका लागि तिथि तोकिएको छ । निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ ।
आम नेपाली जनताले जे मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । राजपा नेपालले पनि त्यही मूल्याङ्कन गरिरहेको छ– यो सफल सरकार होइन । जुन आकाङ्क्षाका साथ नेपाली जनताले दुईतिहाइ मत दिए र सरकार गठन भयो, त्यो आकाङ्क्षा सरकारले बोकेन । ठ्याक्कै उल्टो काम गर्‍यो ।
जनतामा दिनप्रतिदिन निराशा बढेको छ । जनता वैकल्पिक शक्तिको तलासमा हिँडिसके । देशलाई विकल्प चाहिसक्यो ।
यतिबेला सरकारले न जनताको काम गरिरहेको छ । न पार्टी (राजपा)ले उठाएको मुद्दाको सम्वोधन गरिरहेको छ । राजपाका लागि यो काम न काजको सरकार हो ।
अमेरिकाले कहाँ के गर्‍यो, चीन कता छ, जापान के भन्दैछ भनेर बरालिने भन्दा आफ्नो कामतिर लाग्नु नै उत्तम हुन्छ । दुनियाँको ध्रुवीकरणमा नेपालालाई ‘स्यान्डविच’ बनाउन जरूरी छैन । हुँदैन । तर, मुलुकलाई ध्रुवीकरणमा उभ्याउने कोसिस भइरहेको छ, यो राम्रो भएन ।
पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयता स्थापित गर्‍यो । आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप नै संघीयता चलेको छ कि यसमा केही ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ ?
एक शब्दमा अभिव्यक्त गर्नुपर्दा यो संघीयता ‘काम न काज’को हो । मधेस आन्दोलनले यस्तो संघीयताको परिकल्पना गरेको होइन । आन्दोलनले कस्तो संघीयताको माग गरेको थियो, केपी ओलीले बुझेका छैनन् । एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले शासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । सिंहदरबाले मात्रै सरकारको अनुभूत गर्न पायो । बाँकी ओझेल पर्‍यो । हिमाल, पहाड, मधेसका जनताले प्रान्तीय सरकारका माध्यमबाट आफ्नो शासन, प्रशासन र सरकारको अनुभूति गर्ने आन्दोलनको परिकल्पना थियो ।
यहाँको समस्या हाम्रो आफ्नो समस्या हो । हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ । भारतको मुख किन ताक्नुपर्‍यो ? भारततिर फर्किएर बस्ने, हेर्‍यो भने ‘भारतले हेर्‍यो..’ भन्ने ! यो तरिका ठीक हुँदैन ।
नेतृत्वमा त म अहिले पनि छँदैछु । भोलि पनि रहन्छु । नेतृत्व अमूक व्यक्तिले गर्ने होइन राजपाले नै गर्ने हो । पदीय हिसाबले जहाँ रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी रहन्छु । फलानो व्यक्ति भयो भनेमात्रै आन्दोलनको रक्षा र विकास हुन्छ । मुलुकको कायाकल्प हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
तस्बिर: स्ररिता खड्का